Isikripthi soSuku Lothisha esikoleni nasekolishi sihlekisa, sisithakazelisa esisha. Ikhonsathi yesimo kanye nezinkampani ezinsukwini zikaMfundisi
Ngosuku lukaMfundisi, impinduko yangempela iyenzeka kuzo zonke izikole: Amadoda nabesifazane abathokozelayo babonakala esikhundleni sokuba othisha abaqine futhi abagcina isikhathi, amakilasi athule aphenduke ama-greenhouses amancane, izingane zesikole ezizimele, zifaka esikhundleni othisha, othisha bekhanda ngisho nomqondisi ngokwakhe. Ngaphezu kwakho konke, esikhundleni sokuxazulula izinkinga eziqinile kanye nokuzivocavoca, abafundi besikole samabanga aphansi kanye namakilasi aphezulu bakhuluma ngenkuthalo izinombolo ezintsha ezithakazelisayo zohlelo lwekhonsathi othisha. Ngempela, ngosuku lothisha, i-holiday script kufanele ibe yinto engavamile kakhulu - engenangqondo, ehlekisayo, engavuthayo ... Kodwa ucatshangelwe ngokucophelela. Eholidini elihle labafundisi, izingane zesikole zivunyelwe ezinye izindlela, kodwa akufanele ziwele imingcele evumelekile. Ngemuva koSuku LukaMfundisi, usuku olusha lwesikole nazo zonke izikrini, ama-parodies kanye nama-comedy script angenza ama-jokers abe nezinkinga ezincane ...
Khumbula, ukudala isimo esimnandi seholidini, ikhonsathi, idili, inkampani noma ukuhalalisela abafundi ngosuku lukaMfundisi, umuntu akufanele akhohlwe ngemithetho yokuhlonipha nokuziphatha komfundisi. Noma yikuphi "ama-noun" amangazayo, amahlaya ahlaselayo, amahlaya amancane kanye nemincintiswano eyisiphukuphuku nge-overtones engaqondakali ayinqatshelwe! Izimo kuphela ezigciniwe ezihlekisayo, izingoma ezinhle namadansa, ama-lottery amnandi, ama-rallies, ukunikezwa kweziqu ezihlonishwayo, njll.
Ikhonsathi yesimo ngosuku loSuthisha esikoleni - imibono ethakazelisayo
Isimo sokuqala soSuku Lothisha esikoleni siqala ngokubonakala kwabaholi abahle kakhulu kanye nemisindo yemibingelelo yamaholide ejabulisayo. Ingxenye enkulu yalesi simo ingahle ihlelwe njenge:
umncintiswano wamathalenta (amazwi, ama-actor, ama-choreographic);
ukujikeleza emhlabeni jikelele nezinombolo zabamele bamazwe ahlukene (amahlaya angamaNgisi, amaFlamenco aseSpanishi, ukudansa kwaseJapan nabalandeli, njll);
ukuthuthukiswa kwemibuzo yezobugebengu abenza lo mbhiyozo.
Umqondo ongavamile wesikhala sekhonsathi yesikole ngosuku lukaMfundisi "uhambo ngokusebenzisa isayensi". Ngakho abafundi bazoba nethuba lokuhalalisela othisha ngezifundo ezahlukene ngokuhlukile futhi banikeze ukunakekelwa okufanele, bebeqedile izinombolo zabo zesayensi ezahlukahlukene. Isibonelo - ukuhlolwa kwemilingo esiteji sabafundisi be-chemistry kanye ne-physics, imidwebo ehlekisayo mayelana nabafundisi be-mathematics, izivivinyo zamandla namaqhinga okuzivocavoca ama-fizruks, futhi-ke, ingoma yomsindo yomqondisi njenge "nail" yeskripthi. Ngaphambi kokuqala kwekhonsathi yemikhosi, umbhalo kufanele ufundwe ngokugcwele, ihholo lomhlangano kanye nesiteji lihlotshiswe ngezimbali, amabhola, amaphosta, nabo bonke abalingiswa kulo mbhalo bembethe izingubo ezinhle futhi zenziwe imifanekiso efanele. Kuphela uma zonke izimo zifinyelelwa, ikhonsathi ngosuku lukaMfundisi ingeke libaleke.
Izimo ezintsha ezithakazelisayo nezihlekisayo zeholide ngosuku lukaMfundisi
Uma izimo zakudala zeSuku Lothisha esikoleni nasekolishi sezivele zithukuthele, siphakamisa ukuthi sisebenzisa ukucabanga nokucabanga kokudala. Isimo esisha esithakazelisayo seholide yabothisha ngoSuku Lothisha kulula ukuzibhala ngokwakho, emva kokuchitha isikhathi esincane. Kodwa kulula ngisho ukubona amathiphu ethu futhi sisebenzise enye yezinketho zeskripthi eziphakanyisiwe.
Isimo esithakazelisayo seSuku Lothisha - I-Oscar Awards
Leli holide elingavamile lizovumela othisha ukuthi bangajabuli kuphela ngenkazimulo, kodwa futhi bazizwe njengezinkanyezi zangempela zaseHollywood. Ingxenye ebalulekile yeskripthi yilezi: iziklomelo zemiklomelo, umculo ozwakalayo wokukhululwa kwabakhethiweyo, ukuphakanyiswa okuningi okunjenge "Darwin's Mission", "Cybermaster", "Ukulungiswa - ukuhlonishwa kwamakhosi", "I-Caravan of stories", njll. Umthetho oyinhloko wukuthi bonke othisha kufanele bathole umklomelo ngaphandle kokungafani. Eholidini lomsebenzi, akukho uthisha, umqondisi wezifundo, umqondisi, isazi sezenhlalakahle, isisebenzi senhlalakahle kufanele sikhishwe.
Isimo esisha nesithakazelisayo seSuku Lothisha - Uhambo ngePlanethi Yokwazi
Lesi yisikhathi esingavamile futhi esiwusizo seholide. Abalingiswa abakhulu abakwenzayo bangama-first-graders abahlakaniphile bokuqala futhi okuholayo kuyisiqondiso eseplanethi yolwazi. Uzotshela amaqhawe amancane ukubaluleka kwesihloko ngasinye esikoleni. Bonke abenzi bokuhlukumeza bazizwa bebalulekile, futhi umsebenzi wabo unzima futhi kuyadingeka. Ekupheleni kweholide yothisha, ungahalalisela nge-bouquets amahle kanye ne-diploma yombala "Ngomsebenzi onzima nokubekezela okungenamkhawulo".
Iskriphthi esihle sokuSuku lukaMfundisi - i- KVN
Esikhathini seholidi ngosuku lukaMfundisi sasihlekisa kakhulu, ungenza ngendlela yemidlalo ku-KVN. Usuku Lothisha luyisihloko esikhulu kulo mcimbi. Ngokuqinisekile othisha bayohleka amahlaya amahlekisayo nama skits futhi, nakanjani, bazojabula ngamathalenta amawadi abo.
Isimo esisha esingavamile soMnyango Wezinsuku Zomfundisi - Ithekisthi kusihlwa
Umqondo oyinhloko wesimo esinjalo uhambo olubonakalayo lwamakamelo emidlalo yaseshashalazini enkampanini ene-experienced guide. Esikhundleni sezithombe ezidumile ezidongeni, ungasebenzisa i-slide show ngezithombe zabafundisi. Futhi esikhundleni sezinto ezilandelanayo zabadlali abakhulu - izici ezinhle kumfundisi ngamunye. Izimfanelo ezidingekayo - izingcingo zemidlalo yaseshashalazini, ikhabethe lokuhlobisa nokuhlobisa udonga lwamasetha (ngokuqapha esikhundleni se-portraits), ukuhambisana komculo ozwakalayo kanye nokukhanyisa okufakiwe.
Isimo esiphundu sokubonga ngeSuku Lothisha kusukela kubafundi besikole samabanga aphansi
Isimo esimnandi sokubonga uthisha ngoSuku LukaMfundisi kusukela esikoleni esiphansi kuyodingeka silungele abafundi besikole esiphakeme noma abazali. Izingane azikwazi ukubhekana nazo ngokwazo ngomsebenzi obaluleke kangaka. Phela, kubalulekile ukwenza okubaluleke kakhulu futhi okudingekayo:
Thenga izimbali nesipho
ukusabalalisa izingane amavesi okubonga nokubasiza bafunde
udwebe iphephandaba elidongeni elidongeni
khetha futhi uvuselele isenzakalo esincane esifushane sokujabula
ukugqoka umdanso odumile
hlela u-entourage nokuhambisana nomculo
Uma umhleli okhethiwe enesikhathi esengeziwe nesikhuthazo, iskripthi sokubonga ngeSuku Lothisha kusukela kubafundi besikole samabanga aphansi singafakwa esigabeni somlando omdala waseSoviet. Isibonelo - I-Golden Key, iThumbelina, abaculi be-Bremen, njll. Ngakho isakhiwo seholide encane siyogcwala ngokwengeziwe ngokubonakala okucacile kumsunguli womkhosi.
Isimo sezinkampani ezihlekisa kanye nesidlo soSuku lukaMfundisi 2016
I-Corporate for Day's Teachers mhlawumbe iyona kuphela isizathu sokuba othisha abaqinile futhi abaziphatha kahle ukuze baphumule emsebenzini wokubambisana. Ngakho-ke, isimo somcimbi onjalo kufanele sibe nesicebile, sijabulise futhi sihlehle kakhulu ngangokunokwenzeka. Esimweni esinjalo, imidwebo ehlukahlukene, ama-lottery, imincintiswano, izingxoxo, imidlalo iyamukelwa.
I-gypsy fortune-telling. Ukukhangwa kwamahlaya kuzokusiza ukujabulisa iqembu, ukuchitha umoya nokuthola isibikezelo esingenangqondo sonyaka wonke wezifundo ezilandelayo. Intombazane ye-gypsy ingadlala omunye othisha ngokusho kweskripthi, uma elungisa ingubo nezinkanyezi kusengaphambili wonke umuntu okhona.
Ukuchazwa okusha kwe-ballad endala. Ngenombolo enjalo, umfundi wesikole esiphakeme noma uthisha wezincwadi angashintsha kusengaphambili elinye lamabhalla adumile, esikhundleni sencwadi yendabuko enombhalo wamahlaya kusukela ekuphileni kwesikole, kanye nabalingiswa abanothisha.
Ukusabalalisa kwezihloko. Ngamunye wezivakashi zezinkampani angalungisa kusengaphambili isihloko se-curious futhi abhalise nge-diploma noma indondo, ukuze anikezwe ihlombe eliqhumayo ngemuva kweskripthi. Izibonelo zezihloko: "eziqinile kodwa ezilungile," "othisha ovuthiwe kakhulu," "uthisha onobungozi kodwa othandekayo," "hero Russian," "master of equations," "ukugcina isikhathi."
I-Flashmob yabothisha. Enye yezinhlobo zokuzijabulisa zeholidi lomsebenzi wethimba lonke. I-Flashmob ayikwenzi nje kuphela iphakamisa isimo sengqondo, kodwa futhi izogcina ingobo yomlando yesikole ividiyo engavamile futhi ehle kakhulu.
Ukulungiselela isitifiketi seholidini soSuku Lothisha esikoleni noma ekolishi kungumsebenzi omude nesikhathi eside. Ungayihlehlisi ngomzuzu wokugcina. Khetha isimo ngosuku lukaMfundisi ngoMsombuluko, ngesikhathi sokuhlela konke, ulungiselele, ufunde futhi uvuselele. Uma kungenjalo, ikhonsathi entsha ezithakazelisayo, iqembu elithokozisayo lezinsuku noma idili likaSuku Lothisha libeka engozini ngaphandle kokuqala ...
Usuku oluthandekayo lwe-cosmonautics esikoleni: isimo sezenzakalo - ihora lesigaba, imibuzo, ikhonsathi. Imithetho yesiklasi sokuzijabulisa ehoreni esikoleni esiphakeme soSuku lwe-Astronautics
Hlangana noMnyaka Omusha WaseShayina 2016: usuku lokugubha kanye nokuhalalisela kakhulu
Siyakuhalalisela intombi ka-Easter 2016, umngane, izihlobo. Izinkondlo ezimfushane zokuhalalisela ngePhasika. I-Easter kaKristu - siyakuhalalisela ezithombeni
I-SMS emfushane ngeSonto lePalm evesini nase-prose. Ukubingelela kwangempela ngesimo se-SMS ngeSonto lePalm
U-Natalia Lagoda wafa ngezimo ezingalindelekile ku-Lugansk
Ingabe i-shower ehlukile iyasiza ekwelapheni kwe-cellulite?
Izindlela ezinokwethenjelwa kakhulu zokuvimbela ukukhulelwa
Indlela yokuphatha ukwenza konke ungakhohlwa wena?
Uyazi kanjani ukuthi umfana akazange abe nentombi isikhathi eside?
8 Izinyathelo Zokuphila Okusha
Ukudla okungabangela ukuphuza
Imikhiqizo eyishumi ephezulu ye-antidepricant
Ukugqoka kanjani ejimini?
Musaka kusuka ekholifulawa